‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ सुपर फ्लप भएपछि बिग्रिए कलकारका सम्बन्धहरू ! – Nayabook
‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ सुपर फ्लप भएपछि बिग्रिए कलकारका सम्बन्धहरू !
शक्ति श्रेष्ठ र कविता मानन्धरको डेब्यू फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक भएको करिब एक साता भयो। फिल्म ‘सुपर फ्लप’ भयो।
फिल्मबारे समीक्षकहरूले विभिन्न तर्क राखे। कतिले फिल्ममा कुनै ठोस कथा नै नभएको समेत भने। फिल्म ‘टु बी कन्टिन्युड…’ भन्दै अनिश्चयमा सकिन्छ। तर यसले दर्शकलाई प्रतीक्षा र कौतुहलतामा बाँध्न असक्षम देखिन्छ।
फिल्मकी अभिनेत्री वर्षा राउतले आफूलाई फिल्म सार्वजनिक हुने मिति तय हुन्जेल समेत थाहा नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनी फिल्मको प्रचार-प्रसारमा पनि देखिइनन्। फिल्ममा आफ्नो डबिङ नै नभएको भन्ने उनको अर्को तर्क थियो।
फिल्मको प्रचारप्रसारमा वर्षासँगै, करिश्मा मानन्धर र मुख्य अभिनेत्री कविता मानन्धर पनि देखिएनन्।
एक समयका चर्चित शिव र करिश्मा छोरा र छोरीसँगै पर्दामा देखिन लागेकाले फिल्मबारे धेरैको चासो थियो। यद्यपि फिल्मले दर्शकको मन तान्न सकेन। हलमा दर्शकको उपस्थिति निकै कम भएको हलवालाले पनि स्विकारे। उनीहरूले तमिल फिल्म ‘मास्टर’सँग नेपाली फिल्म तुलना गर्दै ‘बरू फिल्म मास्टरले राम्रो दर्शक पाइरहेको छ’ भने।
फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ दिपेश सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन्को रोना महामारीले फिल्म उद्योग कोमामा पुगेको परिस्थितिमा नयाँ फिल्म सार्वजनिक गरेर उद्योगलाई टेवा पुर्‍याउनुअघि सरेको टोलीले बताएका थिए। तर यो अवस्थालाई निर्माण टोलीले हाइलाइटमा आएर अवसरको रूपमा लिएको देखिन्छ।